သားသား ဖိနပ်ချွတ်ထားတယ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » သားသား ဖိနပ်ချွတ်ထားတယ်
Posted by တောတွင်းပျော် on Dec 31, 2011 in Copy/Paste | 10 comments
သားသားက ဘုန်းကြီးကျောင်းသားပေါ့ ။ သားသားနေတဲ့ဘုန်းကျောင်းက မြို့ကလေးကို အထက်စီးကမြင်နေရတဲ့
တောင်ကုန်းပေါ်ဆောက်ထားတဲ့အစိုးရရဲ့ တောင်တန်းသာသနာပြုကျောင်းပေါ့ ။ ဒီကျောင်းမှာ သားသားရယ်၊ဘုန်းဘုန်းရယ်
နှစ်ယောက်တည်းနေတာ။ ဘုန်းဘုန်း ရန်ကုန်က အစိုးရလွှတ်လို့ဒီမှာကျောင်းလာထိုင်တယ်လို့ ပြောတာပဲ။
သားတို့ နေတဲ့ မြို့ကလေးမှာ ဗုဒ်ဓဘာသာဝင်ဆိုလို့အစိုးရဝန်ထမ်းနှစ်ဆယ်ကျော် သုံးဆယ်နီးပါးနဲ့ဒီမှာအနေကြာနေပြီးဖြစ်တဲ့ 
ဗမာလက်သမား မိသား ၂စုပဲရှိတာ။
သားသားလား….ကျောင်းနေတာပေါ့ ။ ဘုန်းကျောင်းနေ အစိုးရကျောင်းတက်…
သားသားက မနက်၎နာရီဆို အိပ်ယာကထ ဆွမ်းထမင်းချက်၊မနေ့ ညကတည်းက မြို့ထဲကကြိုတင်ယူထားတဲ့ကြိုတင်ဟင်းတွေကိုနွှေးပြီး
အာရုဏ်ဆွမ်းအတွက်ပြင်ရတယ်။ ကြိုတင်ဆွမ်းယူရတာက ဒီလိုပါ။ သားသားတို့ မြို့က ဆွမ်းဟင်းပို့ တာက အလှည့် ကျနဲ့ ပါ။ အာရုဏ်ဆွမ်းပို့ အလှည့် ကျတဲ့ဝန်ထမ်းတွေ အချိန်မရကြတော့သားသားကပဲ ညနေကျောင်းဆင်းပြီး ဘုန်းကျောင်းပြန်ရောက်
သန့် ရှင်းရေး၊ ဟိုအရေးဒီအရေး အကုန် ကမန်းကတန်းလုပ်… စုပေါင်းဟင်း(ဟင်းလေးအိုး)ကိုနွှေးထားရင်း ရေချိုး..ပြီး ညနေစာ
ခပ်မြန်မြန်လေးစား အားလုံးပြီးပြီဆိုတော့ မှ စတီလ်ချိုင့် နှစ်လုံးဘယ်ညာကိုင်ပြီး နောက်တစ်နေ့ မနက်အာရုဏ်ဆွမ်းအလှည့် ကျတဲ့ 
တချို့ အိမ်တွေကဘုန်းကျောင်းအောက်နား နီးနီး၊ တချို့ ကမြို့လယ်ပိုင်းလောက်၊ တချို့ က ဟိုး မြို့တဖက်ထိပ်၎မိုင်လောက်ဝေးတဲ့ နေရာ
ဒီနေရာတွေကို သားသားညနေတိုင်း ခြေတိုလောက်အောင်ကို သွားနေကြလေ။ နေ့ ဆွမ်းဆိုရင် မိသားစုရှိတဲ့ အိမ်က တာဝန်ယူပြီး သူတို့ ကိုယ်တိုင်
လာပို့ ကြတယ်။ တခါတလေစစ်တပ်က ရဲဘော်လေးတွေက သွားယူပေးပြီး နေ့ ဆွမ်းကပ်တာကိုလည်း ဒီရဲဘော်လေးတွေကပဲ ကပ်ပေးပါတယ်။
သားသား နေ့ ခင်းပိုင်းဆိုကျောင်းတက်နေတာကိုး။ သားသားတို့ ဘုန်းကျောင်းနဲ့ စစ်တပ်ကနီးနီးလေးပါ။
သားသား မနက်မနက်ဆွမ်းထချက်ရတဲ့မီးဖိုချောင်နှင့်ကျောင်းကြီးကမဆက်ပဲ သီးသန့် ခြားပြီးဆောက်ထားတာ။ ကျောင်းကြီးနဲ့ မီးဖိုချောင်ကြား
ဆယ့် ငါးပေလောက်ကျယ်တဲ့ မြေပြောင်ပြောင်ပေါ်ကနေ ကျောင်းကြီးပေါ်လှေကားသုံးထစ် မီးဖိုချောင်ပေါ်လှေကားသုံးထစ် တက်ရပါတယ်။
သားသားက မီးဖိုချောင်နှင့် ကျောင်းကြီးပေါ် တက်လိုက်ဆင်းလိုက် ဝင်လိုက်ထွက်လိုက် တရစပ်နဲ့မျောက်မျက်စိနောက်လောက်အောင်ကို
ဘုန်းကျောင်းဝင်းထဲ ဖိနပ်မစီးရဘူးတဲ့လူကြီးတွေကပြောဖူးတော့သားသားလည်း ဖိနပ်မပါခြေပြားနဲ့ မြေပြောင်ပြောင်ကိုနင်း မီးဖိုဝင်လိုက် ကျောင်းကြီးပေါ်ခြေသုတ်တက်လိုက်၊ တခါတလေ အလျင်လိုရင်ပြီးစလွယ်သုတ်၊ တခါတလေကျတော့ လည်းမသုတ် ဒီတော့ ကြမ်းပြောင်ပြောင်လက်လက်တွေက သားသားခြေခဖဝါးမှာကပ်ပါလာတဲ့သဲတွေမြေတွေနဲ့ညစ်ပေလာတယ်။ ဒါတွေလည်း
သားသားကပဲ ပြန်သုတ်ရတာပါပဲလေ။ စနေ၊တနင်္ဂနွေလို ရုံးပိတ်ရက် လူအလာများတဲ့ ရက်တွေဆို သားသားစိတ်ညစ်ရပြီ။ ကျောင်းပေါ်
တစ်ခုလုံးဖွေးနေတော့ တာပဲ။ သားသားရဲ့ တာဝန်ပဲပေါ့ ။ ဒီလိုနဲ့သားသားတစ်ယောက် တက်လိုက်ဆင်းလိုက် သုတ်လိုက်ဖျက်လိုက်လုပ်နေတာကို
ဘုန်းဘုန်းက သတိထားမိပြီး…. တစ်နေ့ တော့ 
” ဟဲ့ ! တောတွင်းပျော်.. ဖိနပ်မစီးထားဘူးလား..” တဲ့ မေးတယ်။
” ကျောင်းဝင်းထဲ ဖိနပ်စီးရင် ငရဲကြီးမယ်လို့ ပြောကြပါတယ်ဘုရား”
“အင်း! ခက်တော့ တာပဲ ဒီကျောင်းသား.. စီးသာ စီး၊အခုနင့် ဟာက တက်လိုက်ဆင်းလိုက် သုတ်လိုက်ဖျက်လိုက်နဲ့ ၊ မြေကြီးတွေကလည်း
အေးက အေးသနဲ့ !
အခုလို ဘုန်းဘုန်းက စီးပါ ခွင့် ပြုလိုက်တော့သားသား ဝမ်းသာတာပေါ့ နော်။ ဒီလိုဆောင်းတွင်းဆို သားသားတို့ နေတဲ့ တောင်ပေါ်မှာ ညညဆို
ရေခဲမတတ်အေးနေတာ။ အသားတွေပတ်၊နှုတ်ခမ်းတွေခြောက်၊ ခြေဖနောင့် တွေကကွဲနဲ့ ။ ခြေဗလာသက်သက် မြေပေါ်နင်းလိုက်ရင် ခြေချောင်း
ခြေဖျားလေးတွေက ကျဉ်ပြီး ကိုက်လာတော့ တာ။ နေ့ ခင်းပိုင်းနေနည်းနည်းပူလာပြီဆို အပေါ်ကပူ ခြေဖဝါးကအေးနဲ့သားသား မကြာခဏ
ခေါင်းကိုက်တာပေါ့ ။ အခုဆိုသားသားလည်း ကျောင်းဝင်းထဲ ဖိနပ်စီးနေပြီပေါ့ ။
ဒါပေမယ့် လေ၊ ပြီးခဲ့ တဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့ ကပေါ့ 
ထုံးစံအတိုင်း ရုံးပိတ်ရက်အားတော့မြို့ထဲက ဒကာကြီးတွေ၊ဒကာမကြီးတွေ ဘုန်းကျောင်းကိုရောက်လာကြတယ်။
အဲဒီအချိန် သားသားကဖိနပ်စီးပြီး အလုပ်လုပ်နေတာ ကို မြင်သွားတဲ့ဒကာကြီးတစ်ယောက်က
” မောင်တောတွင်းပျော်! ကျောင်းဝင်းထဲ ဖိနပ်မစီးကောင်းဘူးလေ၊ ငရဲကြီးမယ် ” တဲ့ 
သူ့ အနားပါလာတဲ့နောက်ဒကာကြီးတစ်ယောက်က
” ဘုန်းကျောင်းသားဆိုရင် သိရမှာပေါ့” တဲ့ ။ သားသားငိုချင်စိတ်ပေါက်လာတယ်။
သားသားက နေစရာမရှိလို့ စားစရာမရှိလို့ဘုန်းကျောင်းရောက်နေတာမှ မဟုတ်ပဲ။ ဘုန်းဘုန်းမှာ အကူကပ္ပိယ ကျောင်းသားလိုလို့ 
လာနေပေးနေတာ။ မြို့ထဲကအိမ်မှာနေရင် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ကစားလို့ ပျော်နေပါသေး။ ဒီမှာ တစ်ယောက်တည်း ပျင်းခြောက်ခြောက်နဲ့ ။
သားသားလည်းဘာမှ ပြန်ပြောချင်စိတ်မရှိဘဲ သားသားရဲ့ ဖိနပ်လေးကို ချွတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ သူတို့ က လူကြီးလူကောင်းတွေဆိုတော့ 
သားသားကပဲ ခွင့် လွှတ်နားလည်ပေးရမှာပေါ့ ။ ဟုတ်ဖူးလား……….
ဘုန်းဘုန်းက စီးတဲ့ ၊ ဒကာကြီးတွေက မစီးနဲ့ တဲ့ ။ သားသားတော့စိတ်ရှုပ်လာပြီ။ အိမ်မှာပဲ ပြန်နေချင်ပြီ။
သားသားခြေထောက်တွေလည်း အအေးဒဏ်ကြောင့် ခြေဖဝါးတွေကွဲ၊ ဖနောင့် တွေက စပ်ဖျဉ်းဖျဉ်းနဲ့ သွေးတွေတောင်စို့ နေပြီ။
ဒကာကြီးတွေလာတိုင်းအခုလိုချွတ်ခိုင်းနေရင် သားသားလည်းအိမ်ပြန်ဖို့ စဉ်းစားရတော့ မယ်။ သူတို့ တွေပဲ
သားသားကိုယ်စား ဘုန်းကျောင်းသားလုပ်ကြပေါ့ ။ မကောင်းဘူးလား……..
သားသား ဒီမှာဆက်နေရမလား အိမ်ပြန်ဖို့ ကိုပဲစဉ်းစားရမလားဆိုတာ သားသားတစ်ယောက်တည်းမတွေးတတ်လို့ 
ဒီရွာထဲက ဖိုးဖိုး၊ဖွားဖွား၊ဦးဦး၊ဒေါ်ဒေါ်၊ကယ်ကယ်၊တီတီ၊ကိုကို၊မမတို့ လည်း ဝိုင်းစဉ်းစားပေးကြပါအုံးလို့ ။
ဒီလောက်ပါပဲနော်…သားသားအိပ်တော့ မယ်.. မနက် ၄နာရီထိုးရင် ဆွမ်းထမင်းချက်
ကြိုတင်ဟင်းနွှေးရအုံးမှာမို့ …
ဘိုင့် ဘိုင်……..တာ့ တာ………………..
ခေါ (ချွဲ..သလိပ် ညှစ်သည်)
ထွီး(ထွေးထုတ်သည်-ဖင်ကုန်းနေတဲ့အဒေါ်ကြီးကို သွားစင်ရင် မတတ်နိုင်)
ဘုန်းကြီးက ပိုင်သကွဲ့ 
ဘုန်းကြီးက ဒါဆို အကုန် ဒါပဲဖြစ်ရမယ်
ဘုန်းကြီးခွင့်မပြုရင် ပြိတ္တာ.တစ္ဆေ.အိုကဝေတောင် နေခွင့်မရှိ
ဘုန်းကြီး ခွင့်ပြုရင် ဖိနပ်ပဲစီးစီး..ကားပဲစီးစီး..ဆိုက်ကားပဲ စီးစီး ချားပဲ စီးစီး ကြိုက်ရာစီးခွင့်ရှိသကွဲ့ 
အမောင် တာဇံအနေဖြင့် လုံးလုံးမျှအပြစ်မရှိ
ဘုန်းကြီးထက် တတ်တဲ့ ဘုန်းကြီးလူတတ်တွေပြောတာ နားယောင်စရာ မလို အဲသလိုပါ
မတူတဲ့ အတွေးနဲ့ထွေးရလျင်ဖြင့်
ဖိနပ်ဆိုတာ အိမ်ထဲမှာနေယုံကလွဲပြီး ဆူး.ညှောင့်.ခလုတ်ရှိတတ်တဲ့နေရာအစုံမှာ စီးသင့်ပါကြောင်း
အဂ္ဂမဟာဂန္တ ၀ါစက္က ပန္တိတ ဘိဝံသ အဘိဓဇ အဘိဓမ္မာ ဓမ္မာစရိယ ဘဒ္ဒန္တ ဂုရုပုလု ဦးဘဇင်းပေါက်
လူတွေကလည်း.. ဖိနပ်ကို.. ဖိနပ်လို့ပဲမြင်သင့်ပါတယ်..။
ဖိနပ်ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်..စွမ်းဆောင်နိုင်တာ ဆိုတဲ့.. အမှုကိုကြည့်ပြီး.. အကောင်းဆုံးအသုံးချတာထက်ပိုပြီး.. ဘာကိုချော်တောငေါ့..တွေးကြသလည်း ဆိုတော့ကာ…
မသိစိတ်ထဲကနေ.. တဆုံးတွေးတွေးနေကြလို့.. လို့.. ထင်မိတယ်..။
ဘုန်းကြီးကျောင်းသားလေး ရဲ့ အဖြစ်က တော်တော် ဆိုးနေပါလား။
ကျောင်းပေါ်မှာ ညစ်ပတ်ပေရေတာ မရှိရလေအောင် ဖိနပ်မစီးတာ ပိုကောင်းပါတယ်။
တစ်ကိုယ်ရေ သန့်ရှင်းမှုနဲ့ ကျန်းမာရေး အတွက်ကတော့ ဖိနပ်စီးကို စီးသင့်ပါတယ်။
တောတွင်းပျော်ရေ.. မင်း ပြောချင်တာလေး နောက်ကွယ်မှာ ရှိနေတယ်ထင်တယ်နော် ………….
မှန်မှန်ပြော … လူကြီး က ဒါလုပ်နိုင်တယ်ပြောပြီး အောက်ခြေကမလုပ်နဲ့ဆိုတာ ပြောချင်တာ မှတ်လား …
ရှူး ! တိုးတိုး……. ကို htoosan
တောတွင်းပျော် က တာဇံ မဟုတ်ဘူး ဗျ
ဂေါ်ဇီလာ ပုံဂျီး တင်ထားတာ
ခြင်ကိုက်ရင် အတော်ဘဲ …
ကျောင်းပေါ်မှာ မစီးနဲ့ 
ကျောင်းဝင်းထဲမှာ စီး ၊ အပြင်သွားရင်စီး
အိမ်နားက ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာလည်း ကျောင်းဝင်းကကျယ်တော့ အပင်တွေလည်း များ ခဲသေးသေးလေးတွေလည်း ရှိတော့ ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်က ၀င်းထဲကို ဖိနပ်စီးဖို့ ခွင့်ပြုထားပါတယ်… …. …….
ကိုယ်က မစီးရင်တောင် စီးဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ်.. …. ကျောင်းပေါ်ကိုတက်တဲ့ လှေကားရင်းမှာ ခြေသုတ်ခုံ ခပ်ထူထူ ရှိပါတယ်.. အပေါ်ရောက်လို့ ကျောင်းပေါက်ဝမှာ နောက်ထပ် ခြေသုတ်ခုံ လှူထားကြပါတယ်…
ငယ်ငယ်က ကြီးဒေါ်နဲ့ အတူတူ မကြာမကြာ ဘုရားပန်းကပ် ၊ ပန်းအိုးလဲ ၊ ဆွမ်းဟင်းပို့မို့ ဘုန်းကြီးကျောင်းကို ရောက်ဖြစ်တယ်….
ခွင့်ပြုရင် စီးလို့ ရပါတယ်… ဒီဘုန်းကြီးကျောင်းဆို အဲ့လို စီးခွင့်ပြုတာ မှတ်မိသလောက် ကျမခပ်ငယ်ငယ်ထဲကပါ….ဆရာတော်က သက်တော် ၈၀ ကျော် ငယ်ဖြူဆရာတော်ဖြစ်ပြီး ၀ါတော် ၇၀ နီးပါး ရပါပြီ…………
သားသားရေ ဖိနပ်ပြန်စီးထားနော်…။ လာပြောတဲ့သူတွေကိုလည်း ဘုန်းဘုန်းက ခွင့်ပြုထားလို့စီးတယ်လို့ပြန်ဖြေပေါ့…။ ဒီကျောင်းမှာ သားသားမရှိရင် သားသားကိုယ်စား ဘုန်းကြီးကျောင်းသားလာလုပ်မဲ့သူရှိဟန်မတူပါဘူး…။ အဘလည်း လာမလုပ်နိုင်ဘူးနော်…။
ကျနော် ဒီရွာထဲစာစဖတ်လာတာ ၂လကျော်လောက်ပဲရှိပါသေးတယ်။
သူများရေးတဲ့ စာတွေ ဖတ်ရင်းဖတ်ရင်းနဲ့စာရေးချင်စိတ်ပေါက်လာတယ်။
ရင်တွင်းဖြစ် ကျလိကျလိတွေပေါ့ ။
ဘယ်တုန်းကမှ စာတစ်ပုဒ်တောင်အဖြစ်တောင်မရေးဘူးတဲ့ကျနော်
၂၀၁၁ရဲ့ နောက်ဆုံးရက်ကလေးမှာ အမှတ်တရလေး အနေနဲ့ 
ပြုပြင်ပြောင်းလည်းသင့် တဲ့ (ကျနော့် တစ်ဦးတည်းအမြင်)အရာကို
ကျနော့် ငယ်ဘဝ ဘုန်းကျောင်းသားအတွေ့ အကြုံလေးနဲ့ယှဉ်ပြီး
ကြိုးစားရေးကြည့် လိုက်တာပါ။ ။
အားပေးတဲ့ကွန်မန့် တွေကြောင့် လည်း ဝမ်းသာအားတက် ရပါတယ်။
ကျေးဇူးလည်း အထူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ……